Liverpool iyo Real Madrid oo loo gacan geliyay Kylian Mbappe.
Home Horyaalka France Liverpool iyo Real Madrid oo loo gacan geliyay Kylian Mbappe.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa qirtay inuusan wali hubin halka mustaqbalkiisa uu yaalo iyadoo wadahadalo qandaraas kordhin ah lala galayo kooxda heysata horyaalka Faransiiska.
Xiddigii hore ee Monaco ayaa weli lala xiriirinayaa inuu lacag badan ugu dhaqaaqayo Liverpool ama Real Madrid , madaama qandaraaskiisa Parc des Princes uu dhacayo xagaaga 2022.
Mbappe ayaa shaaca ka qaaday inay socdaan wadahadalo ku saabsan heshiis cusub, laakiin wuxuu sidoo kale cadeeyay inuusan qalinka ku duugi doonin shuruudo cusub.
Isaga oo la hadlaya wariyaasha kadib guushii ay todobaadkii hore ka gaareen Montpellier HSC, ciyaaryahanka reer France ee ku guuleystay Koobka Adduunka ayaa yiri: “Waxaan ku jiraa xilli dib u eegis.
“Waxaan doonayaa inaan ogaado waxa aan doonayo naftayda sanadaha soo socda – halka aan doonayo inaan joogo. Waan ku faraxsanahay halkaan, laakiin ma doonayo inaan saxiixo qandaraas oo aan ka tago sanad kadib.”
Labada gool ee Mbappe uu ka dhaliyay Montpellier ayaa ka dhigtay ilaa 14 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan, laakiin PSG ayaa la fahamsan yahay inay u furan tahay iibka xagaagan haddii uusan mustaqbalkiisa u hibeynin kooxda.
Previous articleManchester United oo la siiyay fursad ay kula soo saxiixato Edin Dzeko
Next articleLiverpool oo Calaamadeysay labo xidig oo badal u noqon kara Georginio Wijnaldum